DP Derango Weathers -35 ° amin'ny Fatman miaraka amin'ny fanampiana avy any Teradek & SmallHD | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » DP Derango Weathers -35 ° amin'ny Fatman miaraka amin'ny fanampiana avy any Teradek & SmallHD
Mahomby: 18 Novambra 2020
Fatman, avy amin'ny ekipa Nelms Brothers manoratra / mitarika sy ilay cinematographer an'i Johnny Derango efa ela dia tsy ilay sarimihetsika Krismasy mampihetsi-po mahazatra anao. Ity tantara feno hetsi-panoherana ity dia mitantara ny tantaran'ny zazalahy kely 12 taona, izay, rehefa nahazo vongan-arina tao amin'ny fitehirizany, dia nanakarama olona hitista iray (Walton Goggins) hamaly faty an'i Santa Claus (Mel Gibson).
Ny script ho an'ity hatsikana mihomehy ity dia niantso andiana seho ivelany nihetsika haingana tao amin'ny Pole Avaratra. Ny toerana tonga lafatra dia ny ala any Atsinanana Kanada, izay misy mari-pana tafarina hatramin'ny -35°F / -37.22°C rehefa maty ny ririnina no mahazatra. Ny lakilen'ny fanaovana ny pejy soa aman-tsara dia ireo ekipa fakantsary fakàna sary avy an-toerana sy ny fitaovana nofidian'izy ireo.
Ho an'ny DP Johnny Derango fitaovana iray lehibe dia TeradekRafitra tsy misy tariby, foto-tsakafon'ny endri-javatra efatra nitaingina fiaramanidina ho an'ny Nelms Brothers. "Mandeha fotsiny izany," hoy izy. “Mahazo sary amin'ireo mpanara-maso ahy izay mandeha tsara mandritra ny fotoana rehetra aho.”
“Nampiasa a Teradek Bolt Pro 3000 mpampita sy mpandray rafitra ho an'ny horonan-tsary tsy misy tariby eo anelanelan'ny ARRI Alexa LF sy Alexa Mini LF mankany amin'ny saretiko DIT, ”hoy ny fitantaran'i Andrew Richardson an'ny Digital Imaging Technician (DIT). "Avy tao izahay dia nampiasa router amin'ny alàlan'ny video hizara ny signal video ho an'ny Pomfort Livegrade amin'ny alàlan'ny Teradek COLR (boaty LUT) amin'ny sarety DIT sy amin'ireo mpanara-maso.
“Ho fanampin'ny Teradek singa ao amin'ny sariety DIT, nanana mpanara-maso SmallHD roa izahay izay namela fanamarinana fanampiny amin'ny alàlan'ny mode Spectrum ao amin'ny fitaovana Exposure assist (False Color). ” Mpampiasa SmallHD efa ela, i Derango dia miankina amin'ny metatra miloko sandoka an'ny SmallHD mba hiparitahan'izay alehany. "Tiako Sony OLEDs fa miaraka amiko mitondra tara 702 na 703 foana miaraka amiko amin'ny loko diso ", hoy izy. “Izay no atambatra ahazoako aina ary mahafinaritra ny vokatra.”
Nampiasa mpanara-maso SmallHD 703 ihany koa izy ireo amin'ny rigs Alexa. "Ireo mpanara-maso SmallHD dia niasa niaraka tamin'izy ireo hatrany aza," hoy i Derango. “Na eo aza ny fepetra, eo anelanelan'ny Teradek Nanaitra ny mpandefa sy ny mpandray, "hoy ny fanazavan'i Richardson:" Tany amin'ny toerana sasany dia nahazo mari-pamantarana horonantsary hatramin'ny 200 metatra lavitra izahay, tamin'ny -20 ° C / -4 ° F toetr'andro. "
Tsy ny fakantsary ihany no sampana nahazo tombony Teradekfitaovan'ny. Ao ambadiky ny sarety DIT be atao dia misy fidirana WiFi ary rig kely roa Teradek Ireo servisy nomen'ny Set Dresser, Alex Kim. Ity vahaolana ity dia mamindra HD horonan-tsary amin'ny alàlan'ny WiFi amin'ny fitaovana iOS / Android. Richardson dia nizara famantarana video ho an'ny tsirairay avy amin'ny Pros Pros mamela an'i Kim hijerena ireo horonan-tsary amin'ny alàlan'ny Teradek Fampiharana VUER amin'ny iPad Pro.
Ny ekipa dia nanana fanamby kely teo amin'ny fara tampon'ny horonantsary. "Tsy nanana mpampita horonantsary tsy misy tariby ho an'ny C-Camera izahay ka voatery nifikitra tamin'ny tariby BNC," 1st Nanamarika i AC Chris Chung. “Nalefa fatratra tamin'ny fisondrotana Genie ny fakantsary ary nanana olana maro tamin'ny horonan-tsary izahay tamin'ny fandefasana tariby BNC an-jatony. Rehefa zatra ny signal mafy orina azo antoka miaraka Teradek Raisinao ho zavatra tsy misy dikany ny fahafinaretana omeny. ”
Niandany tamin'izy ireo ny vintana. Vitan'izy ireo ny nandresy ny areti-mandringana tamina iray andro, namono ny famokarana lehibe nandritra ny 7 herinandro tamin'ny 14 martsa 2020. “Teo ivelan'ny baomba COVID izahay”, hoy i Derango. “Mbola nisokatra ny zava-drehetra tany Kanada rehefa nody tany LA aho.” Ao amin'ny sinema izao ny sarimihetsika ary ho hita amin'ny VOD amin'ny faran'ny volana novambra.
Ho an'ny sary hafa sy vaovao hafa, azafady www.aboutthegear.com
Fampahalalana namboarin'ny Lewis Communications: [email voaaro]
Lahatsoratra farany an'i Vika Safrigina (jereo rehetra)
DP Derango Weathers -35 ° amin'ny Fatman miaraka amin'ny fanampiana avy any Teradek & SmallHD - Novambra 19, 2020
CineGear ON AIR ™ Presents - American sinematographer: 100 taona - Novambra 9, 2020
New DoPchoice Snapbags®, Snapgrids® ho an'ny Creamsource® Vortex8 - Novambra 4, 2020
3D LUTs fanitsiana aperture autofocus fampitana fakan-tsary fanaraha-maso Cinematographers saturation loko vahaolana famoronana daylight horonan-tsary ifantohana Mifantoha amin'ny Pro frame rate asongadino ny roll-off LCD maivana maivana Monitor Nits OLED fakantsary fakantsary Fanaraha-maso an-tsary sari-tanety famokarana fampisehoana famokarana mpandray firaketana firaketana fanapahan-kevitra hafainganam-pandeha SmallHD Streaming fahitalavitra Teradek Teradek Bolt Efijery kasihina fitaovana fandefasam-peo Video videographers Vitec Group Wireless Wooden Camera 2020-11-19
Previous: Zixi dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny Google Cloud
Next: Matrox Extio 3: IP KVM voalohany manerantany hanitatra ireo rafitra valo miampita ny sehatr'asa Dual-4K lavitra